ကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ – Curiosity
Home /ကင်ဆာနှင့်ပတ်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ
Articles,Life Science |
ကင်ဆာ (Cancer) ရောဂါဆိုတာ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲကို ရောက်ရှိ လူသိများလာတဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Cancer ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ လက်တင်ဘာသာစကားက ဆင်းသက်တာဖြစ်ပြီး ဂဏန်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ကင်ဆာအကျိတ်ဟာ ပုံမှန်တစ်ရှုးထဲကို ယှက်ဖြာပျံ့နှံ့တဲ့အခါ ဂဏန်းကိုယ်ထည်ဘေးမှာ ဝန်းရံနေတဲ့ ဏန်းလက်ချောင်းတွေနဲ့ ဆင်တူလို့ ဒီနာမည် ပေးထားတာပါ။ ကင်ဆာရောဂါဟာ ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာ လူသိများလာတာ၊ အပြောများလာတာက ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်ပဲ ရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသဘောတရား လွဲမှားယူဆထားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ ဖြစ်တတ်တဲ့ လွဲမှားယူဆချက်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြီး ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
အရင်ဆုံး ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သက်ရှိဇီဝတွေကို ကျွန်တော်တို့ မျက်စိနဲ့ လေ့လာကြည့်ရင် နှစ်မျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ မျက်စိနဲ့ မြင်ရတဲ့ ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့။ သူတို့တွေက ဆဲလ် (Cell) တွေ သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတတ်တာမို့ အရွယ်အစား သိပ်ကြီးတာပေါ့။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Cell တစ်လုံးတည်းကိုယ်တိုင်က သက်ရှိတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ မျိုးနွယ်တွေပါ။ ခပ်လွယ်လွယ် ဥပမာပေးရင် ဘတ်တီးရီးယား (Bacteria) နဲ့ အမီးဘား (Amoeba) လိုသက်ရှိတွေပေါ့။ Cancer ဟာ Cell များစွာပါတဲ့ သက်ရှိတွေမှာပဲ ဖြစ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုလို့ မှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ Cell တွေဟာ အရေအတွက်ပဲ များတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးအစားလည်း စုံလင်လှပါတယ်။ Cell တစ်မျိုးစီမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Protein တွေမတူတာကြောင့် သူတို့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဓာတုလုပ်ငန်းတွေကလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cell တစ်ခုစီက လုပ်ငန်းအချို့ကိုသာ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ ဥပမာ သွေးနီဆဲလ်တွေဆိုရင် Haemoglobin protein အများကြီး ပါရှိတယ်။ Oxygen သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းမှာပဲ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ အချွဲထုတ်ပေးတဲ့ လည်ချောင်းနံရံက Cell တွေဆိုရင်လည်း နေရာက ရွေ့လျာဖို့မလိုပဲ၊ အချွဲတွေ စစ်ထုတ်နေတဲ့ တာဝန်ကိုသာ အထူးပြုကြပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် Cell တွေဟာ Tissue အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူ မှန်ကန်တဲ့ Tissue တည်ဆောက်ပုံ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သွေးကြော၊ လေပြွန်၊ စသည်ဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန် Tissue တစ်ခုထဲမှာ Cell တွေ စီစဉ်ဖွဲ့စည်းပုံကို မပျက်ယွင်းအောင် ထိန်းချုပ်ထားရပါတယ်။ အဲဒီလိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Cell တွေရဲ့ ပွားများမှုကို ထိန်းချုပ်ရတာပါ။ Cell တစ်ခုဟာ ပွားများဖို့အတွက် DNA မိတ္တူကူးယူခြင်း၊ Basement Membrane လို့ခေါ်တဲ့ Tissue အောက်ခံအမြှေးပါး နှင့် ချိတ်တွယ်ထားခြင်း စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှသာ ပွားများခွင့်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ပွားချင်တိုင်းပွားကုန်ပြီး Tissue တည်ဆောက်ပုံတွေ ပျက်ယွင်းသွားရင် ကိုယ်အင်္ဂါတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းကုန်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံး သွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
Cell တွေရဲ့ ပွားများမှုကို ထိန်းချုပ်နေတာကတော့ Cell တွေထဲက ဗီဇတွေ ကိုယ်တိုင်ကပါ။ ဗီဇဆိုတာ အထွေအထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ DNA ကို စာဖတ်သူတို့ ကြားဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ အဲဒီ့ DNA ရဲ့ တစ်ချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေကနေ Protein ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို Protein ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ DNA တွေကို ဗီဇ (Gene) လို့ခေါ်တာပါ။ Protein တွေဟာ Cell တစ်ခုကို တည်ဆောက်တဲ့ အုတ်ကျောက်တွေသဖွယ် ဖြစ်နိုင်သလို၊ ဓာတ်ပြုမှုတွေမှာ ကူညီပေးတဲ့ ဓာတ်ကူပစ္စည်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Gene တွေက သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေက တဆင့် သက်ရှိရဲ့ အပေါ်ယံ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးထားတာပါ။
Cancer အကြောင်း ပြန်ဆက်ရင် Cell တွေရဲ့ Gene ပေါင်းများစွာထဲမှာ အနည်းငယ်သော Gene တွေက Cancer ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ကြတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ Cell ကွဲပွားမှုကို အားပေးတဲ့ Proto-Oncogene တွေပါ။ Proto-Oncogene တွေက ပုံမှန်တော့ Cancer မဖြစ်စေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗီဇဖောက်ပြန်သွားရင်တော့ Oncogene ဖြစ်သွားပါတယ်။ Proto- ဆိုတာက မတိုင်ခင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Oncos- ကတော့ အကျိတ်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် Proto-Oncogene က အကျိတ်ဖြစ်စေမယ့် ဗီဇလောင်းလို့ အနက်ဆောင်ပြီး Oncogene ကတော့ အကျိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဇ လို့အနက်ဆောင်မှာပါ။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ Cell ကွဲပွားမှုကို အားမပေးလို့ အကျိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဖိနှိပ်ပေးထားတဲ့ Tumor Suppressor Gene တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီ့လို Proto-Oncogene တွေ၊ Tumor Suppressor Gene တွေက သူတို့က ထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေမှတဆင့်၊ Cell တစ်ခု အောင်မြင်စွာ ကွဲပွားနိုင်မယ့် အဆင့်တွေမှာ အားပေးခြင်း၊ တားဆီးခြင်းတွေ အသီးသီး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် ကြနိုင်ပါတယ်။
Cancer ဖြစ်စေတဲ့ Gene တွေ လူမှာ ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာသလဲ။ Cancer ဖြစ်ခြင်းဟာ Cell တွေ ကွဲပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ချိန်ခွင်လျှာ ပျက်ယွင်းသွားခြင်းပဲ မဟုတ်လား။ Cell ကွဲပွားတာကို အားပေးတဲ့ Proto-Oncogene တွေက ပိုတက်ကြွလာတာ ဖြစ်စေ၊ Cell ကွဲပွားတာကို ဟန့်တားနေတဲ့ Tumor Suppressor Gene တွေ ပိုအားလျော့သွားတာကြောင့် ဖြစ်စေ၊ Cell တွေဟာ မူလထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေ လွတ်ထွက်ပြီး ပွားများချင်သလို ပွားများလာပါတယ်။ အဲဒီ့ မူမမှန်တဲ့ Cell တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပေမယ့် ခုခံအားစနစ်ကနေ ပြန်လည် တိုက်ဖျက်သေးတယ်။ ခုခံအားစနစ်ကိုမှ ကျော်လွန်သွားပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ မူမမှန် Cell တွေက အရမ်းပွားလာပြီး အကျိတ်ဖြစ်လာတော့တယ်။ ဒီကနေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့ကုန်ပြီး ကိုယ်အင်္ဂါအသီးသီးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အပြင်းအထန် ထိခိုက်စေရာကနေ နောက်ဆုံးမှာ အသက်ပါဆုံးရှုံးရတာပါပဲ။ အတိုချုပ်ပြောရရင်တော့ Cancer ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တရားခံက Cell ပွားမှုကို လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်တဲ့ ဗီဇတွေရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုပါ။ အခုလောက်ဆိုရင် Cancer ဖြစ်ပွားပုံအကြောင်းကို အကြမ်းဖျင်း သဘောပေါက် လောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Cancer အပေါ် ထားရှိတဲ့ လွဲမှားယူဆချက်တွေအကြောင်းကို ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ လွဲမှားယူဆချက်တိုင်းမှာ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ Cancer ရောဂါဖြစ်ပွားပုံအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိမလဲ၊ ချိန်ထိုးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
ပုံ – ဗီဇဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကင်ဆာ ဖြစ်လာပုံ။ Photo Credit – Broad Institute of MIT & Harvard
လွဲမှားယူဆချက် (၁) ။ ကင်ဆာသည် ခေတ်ပေါ်ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်သည်
အဲဒီ့ လွဲမှားယူဆမှုကတော့ အတော်လေးကြီးမားတဲ့ ကိစ္စပါ။ သူ့အကြောင်းကိုတော့ အသေးစိတ်ပြောချင်ပါတယ်။ Cancer ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအချက်တွေကို စဉ်းစားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ ချက်ချင်း ပေါ်လာတာက ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ တာရှည်ခံဆေးတွေ၊ ဆိုးဆေးတွေ၊ ဆေးလိပ်တွေပါ။ အဲဒီ့ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေက ယနေ့ခေတ်မှာ ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒါတွေနဲ့ပတ်သက် ဆက်နွယ်တဲ့ Cancer အကြောင်းကို လူထုကြားမှာ ကျန်းမာရေးအသိ ပျံ့ပွားအောင် လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဘေးထွက်ရလဒ်ကတော့ Cancer ဟာ ယနေ့ခေတ်မှ ပေါ်ပေါက်လာသယောင် ကောလဟာလတွေပါပဲ။
Cancer ဟာ ယနေ့ခေတ်မှသာ ပေါ်ပေါက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်တည်းက ရှိတဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Cancer လို့ နာမည်တပ်မထားတာပဲ ရှိခဲ့မှာပါ။ Cancer က ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပျံ့နှံ့တဲ့အခါ အရိုးလည်း မချန်ပါဘူး။ အရင်ခေတ်တုန်းက လူတွေမှာ Cancer ရှိမလား အထောက်အထားကို ရှာဖွေချင်ရင် ရှေးဦးလူတွေရဲ့ အရိုးစုတွေကနေ Cancer ပျံ့ပွားမှု လက္ခဏာတွေကို ရှာရမှာပါပဲ။ ရှေးဟောင်းသုတေသနမှာတော့ Cancer ရောဂါနဲ့ လက္ခဏာချင်း ဆင်တဲ့ရောဂါတွေကို ရှေးခေတ်ကျမ်းနဲ့ မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရဖူးပါတယ်။ ၂ဝ၁၄ခုနှစ်တုန်းကပဲ Sudan နိုင်ငံမှာ တူးဖော်တွေ့ရတဲ့ လူ့အရိုးစုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် သုံးထောင်ကျော်ကဖြစ်ပြီး၊ ညှပ်ရိုး၊ လက်ပြင်ရိုး၊ နံရိုးများ၊ ကျောရိုးဆစ်များ၊ ပေါင်ရိုးများအထိ အရိုးပေါ် Cancer ပျံ့နှံ့မှုရဲ့ လက္ခဏာတွေကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ (Michaela Binder, 2014)
အဲဒီ့အပြင် Cancer က လူမှာပဲ ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း Cancer ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ရောဂါတစ်ခုပါပဲ။ ခုနကပြောသလိုဆိုရင် လူလုပ်ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် တိရစ္ဆာန်တွေမှာ Cancer ဖြစ်ရတယ်လို့ စောတက တက်ဖွယ်ရာရှိတယ်။ ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒိုင်နိုဆောနည်းတူ ရှေးခေတ်က တိရစ္ဆာန်ရုပ်ကြွင်းတွေမှာလည်း Cancer ဖြစ်တဲ့ အထောက်အထားတွေ တွေ့ထားပါတယ်။ (B.M.Rothschild, 2003)
အဲဒီ့အပြင် Cancer ကို ဖြစ်စေတာက ယနေ့ခေတ် ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်မှာ ပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာလည်း အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေပါတယ်။ Virus တွေကြောင့်လည်း DNA တွေ ဖောက်ပြန်နိုင်ပြီး Cancer ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Human Papilloma Virus – HPV ကြောင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Radon ကလည်း တချို့ဒေသတွေမှာ မြေကြီးထဲကနေ အလိုအလျောက် တငွေ့ငွေ့ထွက်နေတတ်တယ်။ Radon ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့်လည်း အဆုတ်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သဘာဝဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Cancer ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ မြေပဲနဲ့ ကောက်နှံတွေမှာ ပေါက်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးကနေ Aflatoxin ဆိုတဲ့ အဆိပ်ထွက်ပါတယ်။ အဲဒီ့အဆိပ်ကြောင့်လည်း အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။ သဘာဝတရားမှာ ရှိပြီးသား အကြောင်းအချက်တွေနဲ့တင် Cancer ဖြစ်ဖို့ လုံလောက်နေပါတယ်။ Cancer ဖြစ်ပွားမှုက အရင်ကထက် ပိုပေါများလာတယ်လို့ စောတက တက်ကောင်း တက်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများလာတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် Cancer ဟာ လူ့နည်းပညာကြောင့် ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါအသစ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
လွဲမှားယူဆချက် (၂) Cancer က ကူးစက်တတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ကူးစက်မှုကနေ ကာကွယ်လို့ရနိုင်တယ်
Cancer ဟာ သက်ရှိတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ကူးစက်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါပိုးကြောင့် ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဗီဇကွဲပြားမှု ကြွယ်ဝတာကြောင့် လူအချင်းချင်းတောင် တခြားလူတစ်ယောက်မှာ Cancer Cell က မပွားများနိုင်ပါ။ Cancer Cell တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက လာတဲ့ Cell မှန်း ခုခံအားစနစ်က သိရှိထောက်လှမ်းမိသွားလေ့ရှိတယ်။ Cancer ဖြစ်ဖူးသူရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါတစ်ခုကို တခြားသူမှာ အစားထိုးတဲ့အခါ အလွန်ရှားရှားပါးပါး Cancer ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အင်္ဂါအစားထိုးမှု တစ်သောင်းမှာ နှစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Cancer တွေကို ကူးစက်နိုင်ကြောင်း အဖြစ်နိုင်ဆုံး လွဲမှားယူဆချက်ကတော့ Virus ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Cancer တွေပါ။ Virus က Cancer ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Cancer Cell ကိုယ်တိုင်ကတော့ မကူးစက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Virus ကတော့ ကူးစက်နိုင်တယ်လေ။ ဒီတော့ ပထမလူမှာ Virus ရှိတယ်။ Virus က နောက်လူကို ကူးစက်သွားတယ်။ ပထမလူမှာ Cancer ဖြစ်တယ်။ နောက်လူမှာလည်း လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် အပေါ်ယံကြည့်ရင် Cancer က ကူးစက်သယောင် ထင်ရနိုင်တယ်။ သားအိမ်ခေါင်း Cancer ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကလည်း စင်စစ်မှာတော့ HPV Virus ကာကွယ်ဆေးတွေပါပဲ။ HPV Virus က သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာဖြစ်စေတာကြောင့် HPV မကူးစက်ရင် Cancer ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသွားမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ (Hugo De Vuyst et al, 2009)
လွဲမှားယူဆချက် (၃) Cancer ဆဲလ်တွေက အချိုကြိုက်တယ်
နောက်တွေ့ရတဲ့ အယူအဆတစ်ခုကတော့ သကြားက Cancer Cell တွေ ပွားများအောင် အားပေးတယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း လူနာရဲ့ နေ့စဉ်အစားအသောက်မှာ ရှောင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားသေးတယ်။ သကြား (Sugar) ဆိုတာ ယေဘုယျဆန်လွန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါ။ Glucose နဲ့ Fructose လို အပင်ထွက်သကြားတွေ အပါအဝင် ဇီဝမော်လီကျူးအုပ်စု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်မှာ သုံးနေတဲ့ သကြားပုလင်းထဲက သကြားကတော့ Sucrose သကြားပေါ့။ Sucrose ဆိုတာလည်း Glucose မော်လီကျူး တစ်ခုနဲ့ Fructose တစ်ခု ပေါင်းထားတဲ့ မော်လီကျူးတွဲတစ်ခုပါ။ ဂျုံနဲ့ဆန်မှာ ပါတဲ့ ကစီ ဆိုတာလည်း အမှန်တော့ သကြားမော်လီကူးတွေကို ပုတီးသီထားသလို ဆက်တန်းရှည်ကြီး ဆက်ထားတာပါပဲ။ ကိတ်မုန့်ပေါ်က ခရင်မ်လေးကဖြစ်ဖြစ်၊ ပျားရည်စက်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ သကြားခဲလေးဖြစ်ဖြစ်၊ ပေါင်မုန့်ကြမ်းဖြစ်ဖြစ်၊ အစာချေလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားရင် အစာချေ enzyme တွေကြောင့် ဘယ်သကြားပဲ ဖြစ်နေနေ Glucose နဲ့ Fructose တွေအဖြစ် ဘဝဆုံးရတာပဲ။
Cancer Cell မှမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရှိ Cell တွေအားလုံးဟာ သကြားမော်လီကျူးတွေကို စွမ်းအင်ထုတ်ယူဖို့ လောင်စာအဖြစ် သုံးစွဲကြရပါတယ်။ Cancer Cell က အချိုကို ခုံခုံမင်မင် နှစ်သက်တယ်။ သကြားစားရင် ရောဂါဆိုးတာ မြန်လာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ Cancer Cell တွေက ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ မြန်ဆန်တယ်။ ကြီးထွားတာလည်း မြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က တခြား Cell တွေထက် အာဟာရ ပိုလိုအပ်နေမှာပဲ။ အဲဒီ့ အာဟာရလိုအပ်မှု ကွာခြားချက်ကလေးတွေကို နားလည်အောင်လုပ်ပြီး၊ ပိုကောင်းတဲ့ ကုထုံးတွေကို ရှာဖွေဖို့ သုတေသီတွေက စမ်းသပ်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှရေရာတဲ့ အဖြေမရှိပါဘူး။ Cancer က သကြားကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ သာဆိုးသေးတာပေါ့။ တစ်ခုသတိထားဖို့ရှိတာကတော့ သကြားနဲ့ ကစီတွေ အများကြီးစားရင်တော့ အဝလွန်နိုင်တယ်။ အဝလွန်ခြင်းကိုယ်တိုင်က Cancer အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့် နောက်ခံအခြေအနေတွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။
လွဲမှားယူဆချက် (၄) အံ့ဖွယ်စားစရာတွေက ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်
ဘလူးဘယ်ရီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ လက်ဖက်စိမ်း…. စသည်ဖြင့် စာရင်းအရှည်ကြီးရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်က Website ပေါင်းများစွာက ဘယ်လိုပဲ ကြွေးကြော်နေပါစေ၊ အံ့ဖွယ်အစားအစာ (Superfood) ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ စျေးကွက်ရှာဖို့ ကြော်ငြာတာ သက်သက်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံသုတေသန အထောက်အထား လုံးဝမရှိပါဘူး။ (Cancer Research UK, 2015)
ဒီလိုပြောပေမယ့် ဘယ်လိုအစားအစာမျိုး စားရမယ်ဆိုတာကို မစဉ်းစားပဲနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့စားစရာတွေကတော့ ပိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ်။ ဘလူးဘယ်ရီသီးလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖက်စိမ်းတစ်ခွက်ဟာ မျှတညီညွတ်တဲ့ စားသောက်မှုထဲမှာ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများ စားပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုးစုံစုံလင်လင် စားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အသီးအရွက်ကမှ ကောင်းတယ်လို့ ရွေးစားစရာတော့ မလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ Cancer ဟာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ စားစရာ တစ်ခုခုတည်းက သင့်မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အကြီးအကျယ် ပါဝင်ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားတာကတော့ အပေါ်ယံဆန်လွန်းပါတယ်။ Cancer ဖြစ်ပွားနိုင်စွမ်းကို လျှော့ချဖို့အတွက်က ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ဖို့၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့၊ အရက်လျှော့သောက်ဖို့ စတဲ့ ဆင်ခြင်နေထိုင်မှုတွေ အားလုံးပေါင်းစပ်မှ ထိန်းသိမ်းနိုင်တာပါ။
လွဲမှားယူဆချက် (၅) အက်ဆစ်ဓာတ်များတဲ့ စားသောက်မှုက ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်
Cancer နဲ့ ပတ်သက်ရင် အခြေခံအဆင့် ဇီဝဗေဒမှာတောင် လွဲမှားနေတဲ့ ကောလဟာလတွေက အံသြဖို့ကောင်းလောက်အောင် စွဲမြဲနေတတ်သေးတယ်။ အဲဒီ့ယုံတမ်းစကားတွေထဲက တစ်ခုမှာတော့ ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ အလွန်အကဲ Acid ဓာတ်များတဲ့ စားစရာတွေက သင့်ရဲ့သွေးကို Acid ဆန်သွားစေတယ်။ အဲဒီ့အခါ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ပိုတိုးလာတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ သူတို့ဆက်ပြောတဲ့ ကာကွယ်နည်းကတော့၊ ပိုကျန်းမာပြီး Alkali ဓာတ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိမ်းစိမ်းနဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ စားရမယ်ဆိုပဲ။ Alkali ဓာတ်များအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပဲ။ အတော် ပဟေဠိဆန်တာက အဲဒီ့အထဲမှာ ရှောက်သီးလည်း ပါတယ်။ ရှောက်သီးကတော့ Vitamin C ကြွယ်ဝလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ Vitamin C ကိုယ်တိုင်က Ascorbic Acid ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အံသြသွားမလား။ ရှောက်မျိုးနွယ်တွေမှာ နောက်ထပ် ကြွယ်ဝတဲ့ ဓာတ်ကတော့ Citric Acid ဓာတ်ပါပဲ။
ဒီသတင်းက ဇီဝဗေဒမှာ လုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ မှန်ပါတယ်… Cancer Cell တွေက Alkali ဓာတ်လွန်ကဲလွန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Acid လွန်ကဲတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကော နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဘယ် Cell မှ Acid ဆန်းလွန်းတာ၊ Alkali ဆန်လွန်းတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ သက်ရှိဇီဝအတွက် သင့်တော်တဲ့ pH အတိုင်းအဆ တစ်ခုအတွင်းထဲမှာသာ ကောင်းပါတယ်။
သင့်တင့်ရုံဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သွေးက ရေလို pH7 တော့ မဟုတ်ဘူး။ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာဆိုရင် pH က 7.38 ကနေ 7.42 အထိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Alkali ရှိတဲ့ဖက်ကို နည်းနည်းလေး ယိမ်းတယ်လို့ပဲ ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီ့ pH အတွင်း ရှိအောင် ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နဲ့ သွေးတွင်း Buffer ဓာတ်တွေက တင်းကျပ်စွာ ထိန်းညှိထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Alkali ဓာတ်များတဲ့ စားစရာတွေ စားတယ်ဆိုတိုင်းလည်း သွေးထဲမှာ Alkali ဓာတ်များလာစရာ မရှိပါဘူး။ အစာကို ဖြေးဖြေးစုပ်ယူရင်း နည်းနည်းစီ ပိုလာတဲ့ Alkali ကို ခန္ဓာကိုယ်က ဆီးအဖြစ် စွန့်ထုတ်ပစ်မှာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျောက်ကပ်ကောင်း နေသရွေ့ သွေးရဲ့ pH ကတော့ ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆီးမှာတော့ စွန့်ပစ်ရတဲ့အတွက် pH အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်တယ်။ အစာစားပြီးနောက်ပိုင်း ဆီးရဲ့ pH ကို စစ်ကြည့်ရင် စားစရာကြောင့် pH ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှန်း သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆီး pH စစ်ခြင်း ကိုယ်တိုင်က ယခုယုံတမ်းစကားရဲ့ အခြေပြုရာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ စားစရာကြောင့် ဆီးမှာ pH တွေပြောင်းကုန်ရင် ကိုယ်ထဲမှာလည်း ပြောင်းကုန်မှာပဲလို့ ယုံမှတ်ကြဟန်တူတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိမ်းစိမ်းလေးတွေ စားတာကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိမှာ သေချာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Acid နဲ့ Alkali ပမာဏတွေအပေါ် ဘာမှ သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Acid များတာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ Acidosis နဲ့ Alkalosis ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီမှာတော့ သွေး pH က ပုံမှန်ထက် အရမ်းနည်းတာ၊ အရမ်းများတာတွေ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကျောက်ကပ်က Acid, Alkali တွေကို ကောင်းကောင်း မစွန့်နိုင်လို့ဖြစ်စေ၊ အဆုတ်ကနေ Carbon Dioxide ကို ထိန်းညှိပြီး မစွန့်ထုတ်နိုင်လို့ Carbonic Acid ပမာဏ မူမမှန်တာဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ထဲမှာ Acid သဘာဝရှိတဲ့ ဇီဝဒြပ်ပေါင်းတွေ ထွက်လာပြီး အဆိပ်တက်သွားတာဖြစ်စေ၊ ကြီးမားတဲ့ ရောဂါဘယ တစ်ခုခုကြောင့်သာ ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ။ Acidosis နဲ့ Alkalosis တွေဖြစ်ရင်တော့ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့ Acid ကြိုက်တဲ့ Cancer အကြောင်း ယုံတမ်းစကားအရဆိုရင် လူ့သွေးက နဂိုတည်းက Alkalosis ဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့ သွေးလို pH များနေရမှာ။ Cancer ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဲဒီ့လူရဲ့ pH က Acidosis ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ ကဲ…. အဲဒီ့ ယုံတမ်းစကားအရဆို ကျန်းမာတဲ့လူလည်း မျော့မျော့ပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
လွဲမှားယူဆချက် (၆) Cancer အတွက် အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေရှိတယ်
အင်တာနက်ပေါ်မှာဆိုရင် ဆေးခြောက်ကနေ ကော်ဖီ ဝမ်းချူဆေးတံတွေအထိ Cancer အတွက် အမျိုးစုံသော ‘သဘာဝ’ကုထုံး ဆိုတာတွေကို ဗီဒီယိုတွေ၊ ကိုယ်တိုင်ပြော ဇာတ်လမ်းတွေ အနေနဲ့ ပြည့်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားအံ့ဖွယ် ကြွေးကြော်မှုတွေနောက်မှာ ၎င်းနည်းတူ ထူးခြားတဲ့ သက်သေအထောက်အထား ရှိရမှာပဲ။ Youtube ဗီဒီယိုတွေနဲ့ Facebook post တွေက သိပ္ပံအထောက်အထား မဟုတ်ပါဘူး။ Peer Review လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ သုတေသနပြုသူ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထားတဲ့ သက်သေအထောက်အထားမျိုးရဲ့ အရည်အသွေးမျိုး မရှိပါ။
လူနာများစွာမှာ အံ့ဖွယ်ကုထုံးတစ်ခုခုကြောင့် Cancer ပျောက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုး မပြောနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီ့လူနာတွေရဲ့ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု၊ ရောဂါရဲ့ အဆင့်နဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း မသိရပြန်ဘူး။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာနဲ့ အမှန်တကယ် ကုသမှု ခံယူထားသလား။ သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်ဆေးပညာနဲ့ ကုသနေစဉ်မှာ အံ့ဖွယ်ကုထုံး တစ်ခုခုကို စမ်းသပ်ခဲ့တာလား။ နောက်ဆုံး Cancer တောင်ဟုတ်ရဲ့လား ထင်ရပါတယ်။
ပြီးတော့ သိပ်သံသယ ဝင်စရာကောင်းတာက ကုထုံးအောင်မြင်မှု သတင်းတွေပဲ ကြားနေရတာပါ။ အဲဒီ့ အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေကို စမ်းသုံးပြီး Cancer နဲ့ ကွယ်လွန်သွားသူတွေကျတော့ရော? ကွယ်လွန်သူတွေက စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးလေ။ အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေကို ကြွေးကြော်နေသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး လူနာတွေကိုပဲ ရွေးချယ်ထုတ်ဖော်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ကုထုံးရဲ့ ရလဒ်အပြည့်အစုံကိုတော့ ဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိတယ်။
ဆေးကုထုံးဆိုင်ရာ ရလဒ်အချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် သုတေသနပြုသူ အချင်းချင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျစွာ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာကော၊ ဆေးကုခန်းမှာပါ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှုတွေကနေ ထုတ်ယူဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးကြောင်း ဒီကိစ္စတွေက ကောင်းကောင်းပေါ်လွင်စေပါတယ်။ ပထမအချက်အဖြစ် ဆေးကုသမှုမှာ လေ့လာစစ်ဆေးတာကြောင့် သုတေသနပြုသူတွေအတွက် ဖော်ပြပါ Cancer ကုထုံးဟာ လုံခြံုစိတ်ချရဲ့လား၊ ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား သက်သေပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ အဲဒီလို ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ စာရင်းအင်းတွေ ကို အခြေပြုပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချိန်ဆစဉ်းစားပြီး လူနာတွေအတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်မှာပါ။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ Youtube video နဲ့ Facebook post တွေဟာ လုံးဝခိုင်လုံမှန်ကန်မှု မရှိနိုင်ကြောင်း သိနားလည်ထားပြီး၊ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် သုတေသနစာတမ်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ပုံနှိပ်၍ဖြစ်စေ၊ တရားဝင် Website မှာဖြစ်စေ ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကို အလေးထားမှတ်သားကြဖို့ လိုပါတယ်။
အံ့ဖွယ်ကုထုံးတွေက ကြော်ငြာကြတဲ့အထဲမှာ Cancer ဆေးတွေက ပြင်းလွန်းတယ်၊ လူနာအတွက် ဆိုးကျိုးပိုများစေတယ်၊ သူတို့ကုထုံးကတော့ သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖုတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းတဲ့အပြင် Cancer ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ်ဆေးပညာမှာလည်း သဘာဝထွက်ပစ္စည်းတွေကို လစ်လျူရှုထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Aspirin ဆိုရင် မိုးမခပင်ရဲ့ သစ်ခေါက်ကနေ ယူပါတယ်။ Penicillin ပဋိဇီဝဆေးဆိုရင်လည်း မှိုတစ်မျိုးကနေ ယူထားတာပါ။ Cancer ဆေးဖြစ်တဲ့ Paclitaxel ဆိုရင် ပစိဖိတ် ယူး ထင်းရှုးပင် (Pacific Yew Tree) ကနေ ထုတ်ယူတာပဲ။
ဒါပေမယ့် Cancer ကျိတ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့အတွက် သစ်ခေါက်ကြီးတွေ ဝါးရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူးလေ။ သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖုတွေမှာ ပါတဲ့ ဆေးဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို သန့်စင်အောင်လုပ်ရတယ်။ ပြီးရင် ခိုင်မာတဲ့ ဆေးကုသမှု လေ့လာချက်တွေ ပြုလုပ်ထားလို့သာ အဲဒီ့ဆေးတွေက ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်မှန်း သေချာပြီး ထိရောက်တဲ့ ကုသထုံးတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
သေချာတာပေါ့။ Cancer ရောဂါရှင်တွေက ရောဂါကို နည်းလမ်းစုံ သုံးပြီး ကြိုးစားတိုက်ဖျက်ချင်ကြတာပဲ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ကုထုံးတွေကနေ၊ မရေရာတဲ့ ကုထုံးတွေအထိ အမျိုးစုံရှာဖွေ စမ်းသပ်ချင်ကြတာကို အပြည့်အဝ နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ပေးချင်တဲ့ အကြံဉာဏ်ကတော့ဖြင့်၊ သုတေသနနဲ့ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိပဲ ‘အံ့ဖွယ်ရာ ကုသထုံး (Miracle Cure)’ လို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် သတိထားဖို့ပါ။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရှာတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ သင့်ဆီလာ ရောင်းနေပြီဆိုရင်ပေါ့။
လွဲမှားယူဆချက် (၇) ကင်ဆာကုသမှုသည် အကောင်းထက် အဆိုးပိုဖြစ်စေသည်
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆေးဝါးကုသမှုဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုဖြစ်စေ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်စေ၊ Cancer ကုသမှုဆိုတာ ပန်းခြံထဲမှာ လမ်းလျှောက်သလို သာသာယာယာ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပြင်းထန်နိုင်တယ်။ တခါတရံမှာတော့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ၊ ကုသမှုက အလုပ်မဖြစ်တာရှိတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့နေပြီးသား ရောဂါအဆင့် မြင့်လွန်းပြီးတဲ့ Cancer တွေဆိုရင်တော့ ကုသဖို့ အလွန်ခက်ခဲတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ နားလည်ထားပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာအောင် ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ကာလ အနည်းငယ် ပိုနေရအောင် ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပျောက်ကင်းဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အကျိတ်အခဲဖြစ်နေတဲ့ Cancer အတွက် စောစောသိမယ်ဆိုရင် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ သွေးကင်ဆာတွေမှာတော့ ဓာတုဆေးဝါးကုသမှု (Chemotherapy) က မသုံးမဖြစ်သုံးရပါတယ်။ Chemotherapy အတွက် ဆေးတွေ ရှာဖွေဖို့ ၁၉၃၅မှာ စတင်ခဲ့တဲ့ သုတေသန အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ဓာတုပစ္စည်းပေါင်း ၃ဝဝဝကျော် စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ထဲက နှစ်ခုပဲ လူနာမှာ စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုးကျိုးများနိုင်ချေရှိတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို လူနာတွေမှာ စမ်းသပ်တဲ့အခါ သုတေသန နည်းစနစ်တွေက ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ပဲ ၁၉၅၃မှာ ဒီ သုတေသနကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့အတူ Chemotherapy နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ဆိုးတွေ ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဓာတုဆေးဝါးကုသမှုဟာ ဆိုးကျိုးများရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းထက် အဆိုးက ပိုများတယ် ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုသမှုတွေကတော့ Cancer Cell တွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ ပြုလုပ်ထားတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် မလွဲရှောင်သာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တခြား Cell တွေကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တာကိုး။ အံ့ဖွယ်ကုသထုံးတွေဆိုတာက ဆိုးကျိုး၊ကောင်းကျိုးတွေ ဆိုပါဦးတော့၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်တယ် ဆိုတာကိုတောင် မပြောပြနိုင်ပါဘူး။ ကုသထုံးတွေကတော့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး ဒွန်တွဲနေမှာပဲ။ Chemotherapy ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုပဲ ပြောနေပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို မဖော်ထုတ်ဘူးဆိုရင် မော်တော်ကားတွေက တခါတရံ မတော်တဆ တိုက်မိတတ်လို့၊ ကော်ဇောပျံတွေက ပိုအဆင့်မြင့်တယ်လို့ ပြောနေသလိုမျိုးနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။
Chemotherapy ဟာ ၃%ပဲ ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နေခဲ့တာတွေက အရမ်းကို မှားယွင်းပါတယ်။ စင်စစ်မှာတော့ ဆေးတွေက လူနာများစွာမှာ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါမှာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားလူနာတွေရဲ့ ၉၆%ကျော်ဟာ Platinum သတ္တုကို အခြေပြုထားတဲ့ Cisplatin ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ပျောက်ကင်းရပါတယ်။ ၁၉၇ဝ ကာလများကဆိုရင် ပျောက်ကင်းမှုက ရဝ% သာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေး Cancer လူနာတွေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုလည်း Chemotherapy နဲ့ပဲ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ၁၉၆ဝကျော်တွေတုန်းဆိုရင် လေးပုံတစ်ပုံကိုသာ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ခဲ့တာပါ။ Chemotherapy ဟာ ၁၉၇ဝ ဆယ်စုနှစ်လယ်မှသာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဆေးလောကမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ လက်ခံလာကြတာပါ။ ယခုအခါမှာတော့ သွေးကင်ဆာအတွက် သာမက၊ အကျိတ်ကင်ဆာတွေဆိုရင်လည်း အကျိတ်ကို ခွဲထုတ်ပြီးနောက်၊ ကျန်ရစ်ခဲ့နိုင်တဲ့ အကျိတ်အသေးလေးတွေ၊ တခြားကိုယ်အင်္ဂါတွေမှာ ပျံ့သွားပြီး မထောက်လှမ်းမိလိုက်တဲ့ အကျိတ်လေးတွေဆိုရင် Chemotherapy နဲ့ပဲ ကုသရပါတယ်။
Cancer အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် ထိရောက်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးတဲ့ Cancer ကုသမှုတွေကို ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့တွေ အဝေးကြီး လိုပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကုသမှုရဲ့ အကောင်းအဆိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ စဉ်းစားရင်တော့ ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်မှုနဲ့ ဝေဒနာခံစားရမှုတွေကို ချိန်ဆရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် လူနာရဲ့ ပုဂ္ဂလဓိဌာန်ကျ စဉ်းစားမှုကိုလည်း ထည့်တွက်ရပါတယ်။ ဘဝတစ်ခုရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ နေထိုင်ရတဲ့ ကာလကို ချိန်ဆရတာဟာ ကင်ဆာကုသမှုမှာ လူနာကိုယ်တိုင်က အမြဲပါဝင် စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စတစ်ရပ်ပါပဲ။
လွဲမှားယူဆချက် (၈) ကင်ဆာခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ တစ်ရှုးစ ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ကင်ဆာပျံ့ပွားမှုကို မြန်စေသည်
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကနေ Cancer က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားနေရာတွေကို ပျံ့ပွားသွားဖို့ဆိုတာ သိပ်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လုပ်သွားရင် လုံခြံုစိတ်ချရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေက အကျိတ်ကို ခွဲထုတ်နေစဉ်၊ သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲပြီး ရောဂါအဖြေရှာဖို့အတွက် အပ်နဲ့ တစ်ရှုးစကို ထုတ်ယူနေစဉ်မှာ Cancer Cell တွေ ပျံ့မသွားအောင် အထူးသတိထားကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် တစ်ခုထက်ပိုမယ့် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားက အကျိတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ရင် နေရာတစ်ခုစီအတွက် ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေကို သီးသန့်စီ အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။
လွဲမှားယူဆချက် (၉) စိတ်ခံစားချက်တွေက ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့ ဆိုးရွားလာမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်
ယခုအချိန်အထိ၊ သိပ္ပံသုတေသန အထောက်အထားတွေထဲမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ စိတ်အခြေအနေတွေက Cancer ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ အဆင့်တက်လာမှုအပေါ် သက်ရောက်လွှမ်းမိုးခြင်းကို မတွေ့ရပါဘူး။ Cancer ရောဂါသည် တစ်ယောက်အတွက် ဝမ်းနည်းတာ၊ စိတ်တိုတာ၊ စိတ်အားငယ်တာတွေက ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ပိုပြီးအကောင်းမြင် တတ်မှာပေါ့။ စိတ်ကို အားတင်းထားလို့ Cancer နဲ့ တော်တော်မသေပဲ၊ သက်ဆိုးရှည်တယ် ဆိုတာမျိုးတွေ၊ စိတ်အားငယ်လွန်းလို့ စောစော သေဆုံးသွားရတယ် ဆိုတာတွေက အထောက်အထားမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက အကောင်းမြင်စိတ် ထားမယ်၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိမယ် ဆိုရင် လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ စိတ်အားတက်လို့ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်မာနေသရွေ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ပုံမှန်နေထိုင်သွားလာနိုင်မယ်။ စိတ်ထောင်းလို့ တိုက်ရိုက်ကြီး ကိုယ်မကြေနိုင်ပေမယ့်၊ ကိုယ်ထောင်းရင်တော့ စိတ်ကြေနိုင်သေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် လူနာအပေါ် စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေက Cancer နဲ့ အသက်ရှင်နေရတဲ့ လူနာကို အားပေးကူညီပေးရာ ရောက်လိမ့်မယ်။
လွဲမှားယူဆချက် (၁ဝ) Cellphone ၊ Microwave Oven နဲ့ ဓာတ်ကြိုးတွေကြောင့် Cancer ဖြစ်နိုင်သည်
ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုကြောင့် Cancer ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လူသိများကြပါတယ်။ Cellphone တွေကနေ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှိတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် ဓာတ်ရောင်ခြည် (Radiation) တွေ လွှတ်နေတယ်ဆိုရင် အတော်များများက လန့်ကုန်ကြတယ်။ အမှန်တော့ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေပါ။ Radiation ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားရင်ကို သွေးပျက်ကုန်ကြတာပါပဲ။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းရှိတဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုတာ ဘာမှအထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူး၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနတွေက ထုတ်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်း (Radiowaves) တွေပါပဲ။ Radiowaves တွေဟာ လှိုင်းအလျား အလွန်ရှည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သယ်ဆောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ကလည်း နည်းပါတယ်။
လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေက စွမ်းအင်မြင့်ရင် ၎င်းတို့ကို စုပ်ယူတဲ့ Atom တွေဆီက Electron တွေကို တွန်းထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ ဒီအခါ အဲဒီ့ Atom က လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြစ်လာပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင် အက်တမ် (Ion) အဖြစ်ကို ကူးပြောင်းသွားတယ်။ Ion ဖြစ်စေတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို Ionizing Radiation လို့ခေါ်ပါတယ်။ Ionizing Radiation တွေက DNA ကို ထိမိရင် DNA ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Cell ကွဲပွားမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဗီဇတွေ ဖောက်ပြန်ကုန်ပြီး အဲဒီ့ကနေ Cancer ဖြစ်တာပါ။ အနုမြူဗုံးကြောင့်ထွက်လာတဲ့ လှိုင်းအလျားတို ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခုပြောနေတဲ့ Radiowave တွေကတော့ တကယ့် ဆန့်ကျင်ဖက်ပါ။ သူတို့က Ion မဖြစ်စေတဲ့ Non-Ionizing Radiation ပါ။ Radiofrequency တွေက အပူကိုတော့ ထုတ်လွှတ်နိုင်တယ်။ ထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက် တစ်ခုကတော့ Cellphone ကို မိနစ်ငါးဆယ်လောက် ပြောရင်၊ ဖုန်းပြောတဲ့ဖက်က ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်တွေရဲ့ အာဟာရသုံးစွဲမှု ပိုမြန်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ရလဒ်တွေကလည်း အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေရဲ့ အာဟာရသုံးစွဲမှု မြန်လာခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုး သက်ရောက်မှုတွေအကြောင်း မသိရသေးပါ။
Radiowave လို လှိုင်းအလျားရှည်တဲ့ နောက်ဓာတ်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးကတော့ Microwave ပေါ့။ စားစရာတွေ အပူပေးတဲ့ စက်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုကြတယ်။ Microwave ကြောင့် Cancer ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေထဲမှာ Microwave က စက်ထဲကနေ အပြင်ကို ပေါက်ထွက်လို့ Cancer ဖြစ်တယ် ထင်ကြတာလည်းရှိတယ်။ Microwave Oven မှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်း လှိုင်းအလျားရှည် ဓာတ်ရောင်ခြည်တွေရဲ့ အာနိသင်ထဲမှာ အပူဓာတ်ထွက်ပေါ်ခြင်း တော့ပါတယ်။ Microwave တွေက စားစရာထဲမှာ ပါတဲ့ ရေ molecule တွေကို စွမ်းအင်နိမ့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ တုန်ခါစေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေက ပူနွေးလာပြီး၊ အပူဓာတ်ထွက်လာတာပါ။ အဲဒီ့ အပူဓာတ်နဲ့ စားစရာကို ကျက်သွားစေတာဖြစ်တယ်။ နောက် မဟုတ်မမှန်သတင်း တစ်ခုကတော့ Microwave နဲ့ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ စားစရာတွေကို စားမိလို့ Cancer ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။ Cancer ဖြစ်ဖို့အတွက် စားစရာဟာ Cancer ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်း (ကာဆီနိုဂျင် – Carcinogen) တစ်ခုဖြစ်သွားရမှာပါ။ အဲဒီ့စားစရာက ဗိုက်ထဲရောက်သွားရင် အူနံရံကဆဲလ်တွေထဲက DNA ကို ဖောက်ပြန်စေပြီး Cancer Cell တွေ ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပါ။ စာဖတ်သူတို့ကို စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အစာထဲက ရေမော်လီကျူးတွေကို တုန်ခါစေလို့ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ အပူပေးပြီး ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ စားစရာက Cancer ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
ပုံ – ရေမော်လီကျူးသည် အသားတင် လျှပ်စစ်ဝင်ရိုးစွန်း ရှိသည့် မော်လီကျူးဖြစ်သည်။ Oxygen ဖက်တွင် လျှပ်စစ် အနုတ်ဓာတ် အနည်းငယ်ရှိပြီး Hydrogen ဖက်တွင် လျှပ်စစ် အပေါင်းဓာတ် အနည်းငယ် ရှိသည်။ ရေမော်လီကျူးများအပေါ် Microwave ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်သွားသဖြင့်၊ လျှပ်စစ်ဝင်ရိုးရှိသည့် ရေမော်လီကျူးတို့သည် တုန်ခါလည်ပတ်သွားကြသည်။ ဤရေမော်လီကျူး၏ တုန်ခါမှုကြောင့် Microwave ၏ လျှပ်စစ်သံလိုက် စွမ်းအင်သည် အပူစွမ်းအင်အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားရပါသည်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ လမ်းမှာသွယ်ထားတဲ့ ဓာတ်ကြိုးတွေ၊ ဖုန်းလိုင်းကြိုးတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကရော၊ Cancer ဖြစ်နိုင်သတဲ့လား။ ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ နီးတဲ့နေရာမှာ နေထိုင်ခြင်းနဲ့ ကလေးသွေးကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းတွေ ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စီးနေတဲ့ ဓာတ်ကြိုးတွေမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်း (Electromagnetic Field) ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဓာတ်ကြိုးတွေက ထုတ်လွှတ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းက 50-60 Hertz လောက်ပဲ ရှိတယ်။ Cellphone တွေဆိုရင် 1800 ကနေ 2200 Megahertz အထိမြင့်တဲ့ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတွေ ထုတ်လွှတ်တာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီ့လျှပ်စစ်စက်ကွင်းကို အိမ်နံရံတွေ တခြားအရာဝတ္ထု အတားအဆီးတွေနဲ့တင် ကာစီးပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ သံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ MRI သံလိုက်ဓာတ်မှန်စက် ဆိုတာ ကြားဖူးမယ်ထင်တယ်။ MRI စက်ကြီးတွေက သိပ်ကြီးမားတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့လို အားပြင်းသံလိုက်စက်ကွင်းနဲ့သာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ Hydrogen Atom တွေကို လှုပ်ရှားစေနိုင်တာပါ။ ဓာတ်ကြိုးမှာပါတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းလောက်နဲ့ဆိုရင် Cancer ဖြစ်ဖို့ထားတော့၊ Hydrogen Atom တွေကိုတောင် အကျိုးသက်ရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁ဝ – ၄ – ၂ဝ၁၅
The National Cancer Institute (NCI) – U.S.
Rehemtulla, A. (2010). Dinosaurs and Ancient Civilizations: Reflections on the Treatment of Cancer. Neoplasia (New York, N.Y.), 12(12), 957–968.
De Vuyst, H.; Clifford, G. M.; Nascimento, M. C.; Madeleine, M. M.; Franceschi, S. (2009). “Prevalence and type distribution of human papillomavirus in carcinoma and intraepithelial neoplasia of the vulva, vagina and anus: A meta-analysis”. International Journal of Cancer 124 (7): 1626–1636.
David Gorski. Chemotherapy doesn’t work? Not so fast… (A lesson from history). (2013). Retrieved April 23, 2015 from https://www.sciencebasedmedicine.org/chemotherapy-doesnt-work-not-so-fast-a-lesson-from-history/
ဒိုင်နိုဆောတွေအကြောင်း မှားယွင်းယူဆနေကြတဲ့ အချက် ၁ဝချက်
သင့်ဦးနှောက်နဲ့ ကွန်ပြူတာအား ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား တည်ထောင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်
TAGS: Articles Biology Life Science Medicine